Optics - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 24 Products for Optics)
Min. Raira: 1 Piece/Pieces
Muenzaniso Nha.: D532
650nm tsvuku mutsetse Laser diode module dhayamita 16mm
Iyi yemhando yepamusoro Red Line Laser module yakanyatso kuzvidzora ine laser diode, yakasanganiswa laser mutyairi wedunhu uye girazi rinoona lens, ichigadzira iri nani mutsetse mhando uye nani simba kugadzikana. Mutsara mutsvuku laser module inoshandiswa zvakanyanya kune akasiyana maindasitiri uye ekurapa kunyorera,...
Iyi tsvuku laser module inosanganisira epurasitiki optic, laser diode uye mutyairi wedunhu. Kwakanakisa kuvhunduka kuramba uye kupisa kupisa. iri rakanakira rakasiyana-siyana rakaderera simba laser zvinoshandiswa, senge kunongedzera zvishandiso, kuenzanisa uye kumisikidzaTsanangudzo: Wavelength: 650nm Simba Rinobuda:...
Iyi 650nm 5mw tsvuku laser module inosanganisira epurasitiki optic, laser diode uye mutyairi wedunhu. Kwakanakisa kuvhunduka kuramba uye kupisa kupisa. iri rakanakira rakasiyana-siyana rakaderera simba laser zvinoshandiswa, senge kunongedzera zvishandiso, kuenzanisa uye kumisikidzaTsanangudzo: Wavelength: 650nm Simba...
650nm 100mw dzvuku mutsetse Laser module
Iyi tsvuku mutsara laser module inosanganisira girazi optic, laser diode uye mutyairi wedunhu. Kwakanakisa kuvhunduka kuramba uye kupisa kupisa. iri rakanakira rakasiyana-siyana rakaderera simba laser zvinoshandiswa, senge kunongedzera zvishandiso, kuenzanisa uye kumisikidza.Tsanangudzo: Wavelength: 650nm Simba...
D14mm 520nm 5mw girini mutsara laser module
Iyi yegirini mutsara laser module inosanganisira girazi optic, laser diode uye mutyairi wedunhu. 14 x 50 mm diki casing saizi haidi yakawanda nzvimbo. iri rakanakira rakasiyana-siyana rakaderera simba laser zvinoshandiswa, senge kunongedzera zvishandiso, kuenzanisa uye kumisikidza.Tsanangudzo: Wavelength: 520nm Simba...
520nm girini Dot Line uye Muchinjikwa laser module
520nm girini laser module's mwenje inoteedzerwa yakananga ne laser diode. 520nm ine yakadzikama, inogona kushanda ichienderera kwenguva yakareba, girini tambo mwenje yakakwenenzverwa uye yakajeka, uye inogona kushandiswa zvakanyanya mukutsvaga kwesainzi, zvipfeko zvekucheka, jira simbi yekucheka. Thread, huni,...
Michini mutsetse Laser module 808nm
Iyo tambo iyo 808nm infrared laser module yakaburitswa isingaonekwe. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina chiratidzo, kuongorora, uye kunyatso kuenderana. Tsanangudzo: Wavelength: 808nm Simba Rinobuda: 40mw, 100mw, 200mw, 500mw Kukura kweCasing: 60 x 26.5 x 10 mm Fan Angle: 45 dhigirii, 60 dhigirii, 90...
Michini dot Laser diode module 808nm dhayamita 10mm
Iko dot iro iro 808nm infrared laser module rakaburitswa harioneke, rinoda yakasarudzika infrared kamera kuti itarise. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina chiratidzo, kuongorora, uye kunyatso kuenderana. Tsanangudzo: Wavelength: 808nm Simba Rinobuda: 5mw, 50mw, 100mw, 200mw, 300mw, 500mw Kukura...
Michini dot Laser diode module 780nm dhayamita 10mm
780nm laser diode module iri padyo neiyo infrared wavelength, inoda yakakosha infrared kamera kuti itarise. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina chiratidzo, kuongorora, uye kunyatso kuenderana. Tsanangudzo: Wavelength: 780nm Simba Rinobuda: 5mw, 10mw, 50mw, 100mw, 150mw, 200mw Kukura kweCasing: 10 x 30 mm...
Michini dot Laser module 850nm dhayamita 10mm
Iyo dot iyo 850nm infrared laser module yakaburitswa isingaonekwe, inoda yakakosha infrared kamera kuti icherechedze. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina chiratidzo, kuongorora, uye kunyatso kuenderana. Tsanangudzo: Wavelength: 850nm Simba Rinobuda: 5mw, 10mw, 20mw, 40mw, 100mw, 200mw, 300mw, 500mw...
Michini dot Laser diode module 980nm dhayamita 10mm
Iyo dotti iyo 980nm infrared laser module yakaburitswa isingaonekwe, inoda yakasarudzika infrared kamera kuti icherechedze. Iyo yakawanda inoburitsa simba ndeye, iyo inopenya yakajeka iyo dot. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina chiratidzo, kuongorora, uye kunyatso kuenderana. Tsanangudzo: Wavelength:...
Michini dot Laser diode module 830nm dhayamita 10mm
Iyo dotti iyo 830nm infrared laser module yakaburitswa isingaonekwe, inoda yakasarudzika infrared kamera kuti icherechedze.Iyo yakawanda inoburitsa simba ndeye, iyo inopenya yakajeka iyo dot. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina chiratidzo, kuongorora, uye kunyatso kuenderana. Tsanangudzo: Wavelength:...
Red muchinjikwa Laser module 650nm 635nm dhayamita 9mm
Izvi dzvuku muchinjikwa mutsetse Laser module iri maindasitiri giredhi Laser. Iyo laser diode ine yakasimba kugadzikana uye hwakareba hupenyu hwehupenyu. iri rakanakira rakasiyana-siyana rakaderera simba laser zvinoshandiswa, senge kunongedzera zvishandiso, kuenzanisa uye kumisikidza.Tsanangudzo: Wavelength: 650nm,...
635nm Inotaridzika mutsvuku mutsara laser module Voltage 24V
Iyi yemhando yepamusoro Red Line Laser module yakanyatso kuzvidzora ine laser diode, yakasanganiswa laser mutyairi wedunhu uye girazi rinoona lens, inogadzira iri nani mutsara mhando uye nani simba kugadzikana. Uchishandisa 24V voltage. Mutsara mutsvuku laser module inoshandiswa zvakanyanya kune akasiyana maindasitiri...
Mutsvuku mutsetse laser module 635nm dhayamita 12mm
Iyi yemhando yepamusoro Red Line Laser module yakanyatso kuzvidzora ine laser diode, yakasanganiswa laser mutyairi wedunhu uye girazi rinoona lens, inogadzira iri nani mutsara mhando uye nani simba kugadzikana. Girazi remaziso lens rinopa mutsetse wakatsetseka. Mutsara mutsvuku laser module inoshandiswa zvakanyanya...
6 x 11.2mm tsvuku mutsara laser diode module
Iyi compact tsvuku mutsara laser module inongova 6 x 11.2 mm chete. Red Line Laser module yakanyatso kuzvidzora ine laser diode, plastiki optical lens. Mutyairi wedunhu ari kunze kwekasi.Tsanangudzo: Wavelength: 635nm, 650nm Simba Rinobuda: 1mw, 5mw Kukura kweCasing: 6 x 11.2mm Magetsi: DC3-5V Parizvino: ≤60mA Optics:...
6 x 11.2mm dzvuku muchinjikwa laser diode modu
Iyi compact tsvuku pamuchinjikwa laser module inongova 6 x 11.2 mm chete. Red Line Laser module yakanyatso kuzvidzora ine laser diode, plastiki optical lens. Mutyairi wedunhu ari kunze kwekasi.Tsanangudzo: Wavelength: 635nm, 650nm Simba Rinobuda: 1mw, 5mw Kukura kweCasing: 6 x 11.2mm Magetsi: DC3-5V Parizvino: ≤60mA...
Dhayamita 12mm 650nm dzvuku muchinjikwa laser diode module
Red Cross Laser module yakazara zvizere-ine laser diode, plastiki optical lens uye driver wedunhu. Ukobvu hwemuchinjikwa hunogadziriswa.Tsanangudzo: Wavelength: 650nm Simba Rinobuda: 1mw, 5mw, 10mw, 20mw, 30mw, 50mw Kukura kweCasing: 12 x 40mm Magetsi: DC3-5V Optics: Plastiki lens Focusbale: Hongu Fan Angle: 60...
10x35mm 635nm 5mw dzvuku muchinjikwa laser diode module
Red Cross Laser module yakazara zvizere-ine laser diode, plastiki optical lens uye driver wedunhu. Ukobvu hwemuchinjikwa hunogadziriswa. Uye isu tine akati wandei fan fan yesarudzo yako.Tsanangudzo: Wavelength: 635nm Simba Rinobuda: 5mw Kukura kweCasing: 10 x 35mm Magetsi: DC3-5V Parizvino: ≤45mA Optics: Plastiki lens...
14x50mm 520nm girini muchinjikwa laser module
Green Cross Laser module yakazara zvizere-ine laser diode, plastiki optical lens uye driver wedunhu. Ukobvu hwemuchinjikwa hunogadziriswa. Uye isu tine akati wandei fan fan yesarudzo yako.Tsanangudzo: Wavelength: 520nm Simba Rinobuda: 5mw Kukura kweCasing: 14 x 50mm Magetsi: DC3-5V Optics: Plastiki lens Focusbale:...
22x110mm 520nm 12mw girini muchinjikwa laser module
Green Cross Laser module izere nekuzvidzora-iine laser diode, girazi optical lens uye driver wedunhu. 520nm yakachena girini, muchinjikwa wakachena uye wakajeka.Tsanangudzo: Wavelength: 520nm Simba Rinobuda: 12mw Kukura kweCasing: 22 x 110mm Magetsi: DC3-5V Optics: Girazi lens Focusbale: Hapana Parizvino: ≤250mA Seta:...
450nm yebhuruu muchinjikwa laser module
Bhuruu Muchinjikwa Laser module izere nekuzvimiririra-iine laser diode, girazi rekuona lens uye mutyairi wedunhu. 450nm yakachena girini, muchinjikwa wakachena uye wakajeka.Tsanangudzo: Wavelength: 450nm Simba Rinobuda: 80mw, 100mw, 500mw, 1500mw, 2000mw, 3500mw, 5000mw Kukura kweCasing: 16 x 70 mm; 22 x 110mm...
405nm yebhuruu muchinjikwa laser diode module
Iyi Blue Cross Laser module inogadziriswa, uye izere -zvayo ine laser diode, girazi rinoona lens uye driver wedunhu. Tsanangudzo: Wavelength: 405nm Simba Rinobuda: 100mw, 150mw, 200mw Kukura kweCasing: 16 x 70mm Magetsi: DC3-5V Optics: Girazi lens Focusbale: Hongu Seta: Laser module, mubati, simba adapter
Optical Girazi BK7 girazi matanda
Yakakwira mhando Sapphire Wafer
Optics Opticals Optics Led Iris Optics Optical Iris Mirror Optics Kupfeka Optics Aspheric Optics